Waxay yareyn kartaa boorsada iyo mugga baakada iyada oo aan la badalin qaabka shayada. Kadib baakadka isku cadaadi, baakadu waxay noqon doontaa mid siman, caato ah, qoyaan-cadeyn ah, iyo carro-caddeyn la'aan. Faa'iido ayey leedahay in la badbaadiyo kharashkaaga iyo booska kaydinta iyo gaadiidka.
Xiinka tuubada Xiinka waa nooc ka mid ah mashiinada isticmaala aaladda wax soo uruurisa ee loo yaqaan 'ultrasonic concentrator' si ay wax uga qabato qeybta xiritaanka weelka baakadka si loo xir xirmo.
Mashiinka waa is haysta oo isu rogi kara. Shaqo yar oo ka yar 1 cbm, waxay awood u leedahay inay sameyso geeddi-socodka oo dhan laga bilaabo xamuulka tuubada, jihada, buuxinta, xiritaanka, jarista illaa soo-saarka ugu dambeeya.
Taxanaha taxanaha semi-otomaatiga FG waxaa lagu fadilay soosaarka cuntada ee wax soo saarka yar iyo kuwa dhexe. Waa kharash-badbaadin iyo is haysta. Alaabooyin kala duwan, waa ikhtiyaari in lagu sameeyo baakadaha jawiga la beddelay ama baakadaha maqaarka.
Xirmooyinka xirmooyinka gawaarida gawaarida ee taxanaha ah ee 'FSG' ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa wax soo saarka qubeyska cuntada si ay ugu fiicnaato. Waa lagu hagaajin karaa baakidh cabbirro iyo qaabab kala duwan leh. Sidoo kale, waa ikhtiyaari in la dalbado baakadaha jawiga wax laga beddelay, ama baakadaha maqaarka, ama labadaba la isku daro.
Fudud oo aamin ah, waxay ku habboon tahay alxanka alaabooyin badan oo balaastig ah, sida boorar, PVC dhar dedan Waa mid jilicsan oo lagu hagaajin karo waqtiga kuleylka iyo waqtiga qaboojinta. Iyo, dhererka xiritaanka wuxuu noqon karaa 1200-6000mm.